‘चिकित्सकलाई लोकसेवा लड्ने मौका दिउँ, स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने स्वायत्त निकाय बनाउँ’: डा. भुसाल
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका डा अमृत भुसाल चुनावी प्रचार प्रसारका लागि कतै दाैडिनुभएको छैन । न उहाँले उम्मेदवारीको प्रचार प्रसारका लागि पर्चा, पम्पप्लेट, स्टिकर, फ्लेक्स वा ब्यानरनै बनाउनुभएको छ।
चिकित्सकसँगको लामो छलफलपछि उम्मेदवारी दिएका डा भुसालले काउन्सिलको क्षेत्राधिकार विस्तार, काउन्सिलबीच समन्वय गर्ने छाता काउन्सिल तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फको नियमनको जिम्मेवारी काउन्सिलमा ल्याउने एजेण्डालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ । लोकन्थलीस्थित समिट हस्पिटलमा कार्यरत डा भुसाल स्वयंसेवी पदमा पुग्नका लागि गरिने खर्चले पछि पदलाई न्याय नगर्ने बताउँनु हुन्छ । डा भुसालले आफ्नो उम्मेदवारी बारे डाक्साब डटकमसँग गरेको कुराकानी यस्तो छ :
“म काउन्सिलमा जान लागेको सिस्टम चेन्जका लागि हो । त्यसैले पनि अहिले भैरहेको भड्किलो चुनाव प्रचार प्रसारमा लागेको छैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिल चिकित्सकका लागि नियमक निकाय हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भैसकेपछि अझै यसका भूमिका खुम्चिएकाे छन् । तर हाल भएकै क्षेत्राधिकारमै पनि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने थुप्रै अवसरहरू छन् । काउन्सिलमा पुग्नासाथ यि सबैकुरा समाधान गरी हाल्छौ भन्ने पक्षमा म छैन । तर सुधार गर्न सुरु गर्ने हो ।
नेपालको हेल्थ सिस्टम २ दशक पुरानो दरबन्दीमा चलिरहेको छ । काउन्सिलको रेकर्डमा ३० हजार चिकित्सक थपिदा सरकारी सेवामा प्रवेश पाउने चिकित्सकको संख्या १३ सय मात्रै छ । केही दिन अघि खुलेको लोकसेवा आयोगको सुचनामा जम्मा २० जना चिकित्सक मागिएको छ । २० वर्षमा जनसंख्या मात्रै थपिएको छैन, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारहरू पनि थपिएका छन् तर जनशक्ति थपिएको खोइ ? पास आउट भएका चिकित्सक नेपालमा वेरोजगार भएर विकल्प खोज्न बाध्य छन् । यो समस्या कसैले नबुझेको पनि होइन तर बुभेर पनि समाधान गर्न ध्यान नदिइएको हो । यसका समाधानका बाटो भनेको स्वास्थ्य सेवा आयोग बनाउँ, सबै स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मीको विवरण आयोगमा राखाैँ, कुन स्वास्थ्य संस्थामा कति स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक छ, कति चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी काम विहीन छन् भन्ने तथ्याङ्क राखाैँ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य किताब खानाको स्थापना गरी आवश्यकता अनुरूप स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नुपर्छ ।
यो कुरा नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समस्याहरूको कूटनीतिक तरिकाले समाधान गर्न दबाब दिने मेरो भूमिका रहन्छ । अर्को कुरा नेपालमा स्वास्थ्यसेवा सँग सम्बन्धित विभिन्न काउन्सिलहरु छन् ।कुनै नितिगत तथा व्यवहारीक समस्या आयो भने बाहिर देखिने चिकित्सक मात्रै भएको छ तर र सरोकार राख्ने मेडिकल काउन्सिल मात्रै भएको छ । अब यसैगरि सँधै मेडिकल काउन्सिल मात्रै भागिधार हुनुहुँदैन । सबै काउन्सिलहरु सम्बद्ध छाता काउन्सिल निमार्ण गरौँ र स्वास्थ्य सेवाका अधिकारलाई यसमा राखाैँ ।
विषेशगरी चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरियताका कुरा गर्दा हाम्रो सिस्टमले कसरी काम गरेको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि सिट बाडफाँड गर्दा काउन्सिलबाट कलेजहरुसँग आर्थिक चलखेलमा हुन्छ भन्ने आरोप नलागेका होइनन् । र यो कुरा शिक्षा आयोगमा पनि हुन्न भन्न सकिन्न । त्यसैले चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि पनि चेकलिष्ट बनाएर काउन्सिलकाे अनुगमन र सिफारिस र सल्लाहमा मात्रै आयोगले अनुमती दिने व्यवस्था गराैँ । होइन भने भवन र सामान हेरेर अनुमति दिदाँ दक्षजनशक्ती उत्पादन हुँदैनन् ।
यस्तै काउन्सिलमा चुनिने वा मनोनित हुने कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै पनि इन्ट्रान्स, लाइसेन्स प्रिपेसन क्लास, एजुकेसन कन्सलटेन्सी खोल्न बन्देज लगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक आवाज उठाउनेछु । यस्तै एमबिबिएस अध्ययन गरेर मास्टर्स पढ्न पर्याप्त सिट छैन । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सक बाहेक अन्य थोरैले मात्रै यो अवसर पाउँछन् । मास्टर्स पढ्नैका लागि विदेशीनु पर्ने अवस्था छ ।
यि कुराहरु रातारात परिवर्तन हुने कुरा होइन, तर सहि नेतृत्वले सहि निणर्य र गर्ने मागनिर्देशनले परिवर्तन गर्नै नसकिने पनि होइन । त्यसैले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्रबाट गर्न सकिने परिवर्तनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।”